Kiniiniin dhiiraa dhala to'achuuf oluu maaf ammana ture? - BBC News Afaan Oromoo
Kiniiniin dhiiraaf dhala to'achuuf tajaajilu fayyaa namaa irraan miidhaa hin geenye qorannoo sadrkaa jalqabaa darbuu isaa, ogeeyyiin wal'aansaa beeksisan.
Kiniiniin guyyaatti al tokko fudhatamu kuni isparmiin dhiiraa akka hin omishamne ittisa.
Dhiiraaf kondomii fi ujjummoo sanyii gudunfuu (vasectomy) alatti filannoo dabalataa simatamudhas jedhameera.
Garuu gabaaf dhiyeessuuf ammalleen waggaa 10 barbaada jedhu ogeeyyiin.
Kiniiniin dubartootaa UK keessatti erga ifa tasifamee waggaa 50 guteera. Kiniiniin dhiiraa maaliif hangas ture?
Namoonni tokko tokko fedhii daldaltoonnifi hawaasni qabu xiqqaaachuun akka kiniiniin dhiiraa hin omishamne daangeessa jedhu.
Garuu kiniiniin kun osoo jiraate dhiiroonni itti fayyadamuuf fedhii akka qaban sagaleen funaaname ammoo ni mul'isa.
Dhiiroonni kiniinii fudhachusaanii dubartoonni amanuun isaaniis gaaffii biraati.
Qorannoon bara 2011 Yunivarsitii Anglia Ruskin UK'tiin gaggeeffame tokkos, dubartoota 134 keessaa 70 kan ta'an dhiironni kiniinicha fudhachuu akka dagatan yaaddoo qabaachu isaanii mul'isa.
Haa ta'u malee kiniiniin dhiirotaaf akka horomooniin hin umamnee taasisuun omishame kun miiraa saalqunnamtii isaanii irratti dhiibbaa akka hin qabaannee kan mirkaneessudha jedhameera.
Dhiira umurii dhalchuu keessatti argamuuf, seeliin isparmii haaraan kaka'umsa hormooniitiin walitti fufiinsaan omishama/umama.
Yeroodhaaf kana dhaabuun ammoo sadarkaa hormoonii osoo hin xiqqeessiin akka hojjatu taasisuun dhiibbaa qabaataa kan jedhu ammoo yaaddoo tokko.
Garuu kiniiniin dhiiraa ammaa kun, qorattoota yunivarsitii Waashingitan fi LA BioMed tiin haalaan qoratamee kaayyoo kana haalaan akka galmaan gahu qorattootaan abdatameera.
Sadarkaa ''duraa tokko'' yaalii dhiirota 40 irratti gaggeeffameen waan abdii qabu fakkaata, jechuun waligahii Niiw Oraleans tti gaggefameerratti himaniiru.
Qorannoo guyyoota 28 keessattis:
10 isaanii kiniinii placebo ykn dummy fudhatan
30 isaanii ammoo kiniinii isa qorannoon irratti gaggeeffamu 11-beta-MNTDC fudhatan
Isaan boodas kanneen qoricha isa fudhatan yoo ilaalaman, hormoniin omisha isiparmiif barbaachisu kan placebo dhaan booda baayyee gadi bu'ee ture yaaliichaan booda bakkuma sirrii isaatti deebii'e.
Rakkina dhaabbachu qaama saalaa dhiiraa
Dhiibbaan isaa xiqqaa fi baayyee gadaanaadha.
Dhiiroota shan kiniinicha fudhataa jiran fedhiin quunnamtii saalaasaanii hir'achu yoo himan, lamaan isaanii rakkina dhaabbachu qaama saalaa akka mudate himu.
Garuu haalli sochii quunnamtii isaanii waan hin hir'anneefu hundisaanu hanga xumuraatti kiniinicha fudhachuun qarannoo nageenya darbaniiru.
Qorattooonii hojii kana duubatti argamanis, Pirofesar Kiristiayaan Waang fi hirriyyoonni baayyee gamadoodha garuu haala bu'aa qorannichaa irratti ofii eeggannoo cimaadhaan hojjataa jiru.
''Qorannoon keenya kiniinichi sochiilee hormonii lama irraa bakka tokkootti omishame kunis, hammantaa isiparmii hirisuun fadhee quunnantii saalaa akkuma jiruutti tursiisa,'' jetti.
Garuu akka mala dhala dhorkuutti fayyadamuuf mirkanneessuuf yaaliiwwan dheeraa fi guddaa taasisuu barbaachisu himti.
Kiniiniin dhiirootaaf dhala dhorkuuf Pirofesar Waang fa'i qorataa jiran kunis kana qofaa miti.
Isheefi hirriyyoonni ishee diibata qaamaa umuun dhiiroonni UK keessaa akka yaalii idil-addunyaatti qorataa jiru.
Fayyadamtoonnis guyyaadhaan dugdaa fi gatteettii bakka goggaa keessa galuu danda'utti dibatu.
Qabiyyeewwan dabata sana keessatti argamanis gara cinaan dhiiraa dhaquun akka 'testosterone' hin omishamne dhorkuun omisha isparmii hir'isa ykn sadarkaa baduutti geessa.
Kana malees Pirofesar Waang, Dr Stefaan Paage fi hirriyoonni isaanii kan Yunivarsitii Washington Mana Barnootaa Medisiinii, qoricha DMAU jedhamuu fi kiniinii dhala dhorkuuf dhiiroonni gara afaanitiin guyyaatti fudhachu danda'an irratti qorannoo gaggeessaa jiru.
Yaaliin dhiiroota 100 irratti gaggeeffamees yaalii itti aanuutti darbuudhaaf akka dandeessisuu mul'iseera jedhu.
Sayintistiin biraa ammoo qoricha yeroo dheeraaf dhala dhorkuuf tajaajiluufi ji'aan fudhatamu dhiyeessuuf yaalaa jiru.
Garuu erga namoonni yaalii isa duraa keessatti qooda fudhatan jeequmsa miiraa isaan mudachuu gabaasnii booda, qorannoo sadarkaa lammaaffaatiif dhiira hirmaachisuu dhaaban.
Qorattoonnis dhiiroota kanneen kiniinii fudhachu hinbarbaanneef haala ittiin yaa'iinsi isiparmii dhaabachuun qaamni dhiiraa isanii garuu akkuma umamaa isaatti akka hojjatu taasisu yaaluuf yaada jiru.
Haaluma kanaanis qoricha 'Vasalgel' kan dhiibbaa omaa oosoo hinqabaannee garuu haala lilimootiin fudhatamee yeroo dheeraaf warra dhiiraatiif akka mala dhala ittisuutti gargaaru omishamaa jira.
Hanga ammaattis beelada irratti qofa yaalame. Qorattoonni dhiheenya kana waan maallaqa argataniif manarratti yaalii eegaluuf jiru.
Pirofesar Riichaard Andarson, Yunivarsitii of Edinburgh irraa, yaalii qorannoo UK'tti dibata qaamaatiin dhiiroota irratti gaggeeffamu ogganu.
Industiriin qorichootaa yaada haarawaa warra dhiiraatiif qoricha dhala dhorkuu argachuuf taasifamu kanaa irratti saffisoo hinturree jedhu. Garuu dhiiroonnii fi dubartoonni filmaata dabalataa kana haala gaariin akka simatan hima.
''Industirichi waa'ee carraa gabaa kan yaadan natti hinfakkaatu,'' jedha.
"Dhugaansaa garuu seenaa dheeraadha- gareensaa hir'ina invastimantiin wal qabata.''
Invastimantii industirii xiqqaadhaan qorattoonni deeggarsa tola oltootaa fi deeggarsa warra qorattootaa irratti hundaa'u. Kunis yeroo fudhata jedhu.
Alan Paasii Pirofesarri 'andrology' akka jedhutti: ''Hanga ammaatti kubbaaniyoota qorichaa muraasatu kiniini dhiiraaa kana gara gabaatti fiduuf fedhii qaba. Sababii isaa adda baasee yoon beeku baadheelleen, tarii baayyeen isaaniii saayinsiirraa daladala irra akka jiranan amana.''